Ny talen'ny 'The Purge' dia nandefa an'i Pete Davidson tao amin'ny 'The Home' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny talen'ny 'The Purge' dia nandefa an'i Pete Davidson tao amin'ny 'The Home'
Ny talen'ny 'The Purge' dia nandefa an'i Pete Davidson tao amin'ny 'The Home'
Pete Davidson dia na aiza na aiza amin'izao andro izao
by Trey Hilburn III Janoary 13, 2022 2,482 hevitra
Pete Davidson dia mitodika manerana ny toerana mampidi-doza amin'izao fotoana izao. Raha noho ny antony tsy nampoizinao azy Sabotsy alina mivelona, dia azo antoka fa ho fantatrao ny fiainam-pitiavany ampahibemaso loatra. Avy amin'i Ariana Grande ka hatrany Kim Kardashian dia nahita ny fisehoany mampalahelo tao amin'ny TMZ sy ny toy izany ilay bandy. Ankoatr'izay, mpilalao sarimihetsika tsara ilay lehilahy ary nipoitra Mpanjakan'ny Nosy Staten, Fahatanorana ary The Squad of Suicide. Ny tetikasany manaraka dia hitarika azy amin'ny karazana horohoro.
The Purge tale, sary manaraka an'i James DeMonaco, Ny Tokantrano dia hampiseho an'i Davidson milalao mpiasa ao amin'ny trano fisotroan-dronono. Rehefa nanomboka nandavaka i Davidson, dia hitany fa manana tsiambaratelo mahafaty ity tranon'ny antitra ity. Vao mainka nivadika ny zava-drehetra rehefa nozahana ny rihana fahefatra amin'ny trano fisotroan-dronono. Hita fa ny tsiambaratelo maizina ao amin'ny trano fisotroan-dronono dia mety mifandray amin'ny lasan'i Davidson.
Bill Block dia eo amin'ny sehatry ny famokarana miaraka amin'i DeMonaco sy Adam Canto manoratra ny script.
Ny Tokantrano no fihodinana faharoa nataon'i Davidson vao haingana. Voalohany dia manana izy Vatana. Vatana. vatana ho avy - slasher A24 izay misy an'i Lee Pace ihany koa.
Indrisy anefa fa sahirana amin'ny asa fanaovan-gazety i Davidson noho ny fifantohana rehetra napetraka amin'ny fiainam-pitiavana sy ny fisarahana. Angamba raha nifantoka tamin'ny bits SNL-ny, dia ho hitan'ny olona fa tsy dia ratsy loatra ilay bandy. Amim-pahatsorana, miandry ny fivoahana mampihoron-koditra nataon'i Davidson izahay. Noho ny antony sasany, na oviana na oviana ny mpanao hatsikana mivadika ho horohoro tampoka dia zavatra tsara izany.